Microsoft nekufamba kwayo kwazvino kuenda kunharaunda yemahara | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft nekufamba kwayo kwazvino kuenda kunharaunda yemahara
Microsoft yanga ichichinja mafungiro ayo kwenguva yakareba, kunyange vamwe vachiti izvo zvaunoda kuparadza Linux kubva mukati. Asi chokwadi ndechekuti vakatoburitsa zvimwe zvigadzirwa zveLinux uye zvavo zveLinux distro sekuziva kwedu. Muchokwadi, tinoona maitiro avakabatanidza Linux subsystem mukati mavo Windows 10, uye zvakare mugore reAzure, tisingatarise mupiro wezvehupfumi nekusimudzira wavakaita kuLinux Foundation nekernel pachayo zvichiteerana. Vakavhurawo zvimwe zvezvirongwa zvavo, vakatenga yakavhurwa sosi chikuva GitHub, nezvimwe.
Hausi iwo mubvunzo werudo kana kunzwira tsitsi, asi wekupona kuri nyore kweMicrosoft pachayo. Asi ikozvino yaenda nhanho imwe kumberi. Isu tatoziva kuti Microsoft yanga iri kuunganidza mari hombe yemitengo yekushandisa, semuenzaniso, FAT pakati pemamwe matekinoroji akagadzirwa neavo eRedmond. Zvinotonzi ivo vauya kuzowana mari yakawanda nekuchaja ma patents kumadivaysi eApple pane neakafoira Windows Mobile.
Mushure mekujoinha iyo Open Source Initiative uye iyo Linux Foundation, Microsoft ikozvino yabatana ne OIN (Open Invention Network) ine anopfuura makumi matanhatu ezviuru patent uye nechinangwa chekubatsira mukudzivirira kweLinux system. Hongu, zora maziso ako kana uchida, asi ichokwadi, haisi jee raApril 1 uye hope. Chimwe chikamu chekambani yakavambwa naBill Gates chatisingazive uye icho chinoratidzika kunge chiri kufamba munzira kwayo.
Zvinotaridza kuti pamusoro pemari, Microsoft iri kuita kuzvipira chaiko kunharaunda. Kune avo vasingazive OIN, idhipatimendi re Zvidziviriro patents zvakagovaniswa nebasa rekuchengetedza Linux. Ndokunge, kushandisa izvi patent kudzivirira kushungurudzwa uye kudzivirira nhengo dzayo dzinosanganisira makambani makuru nemapurojekiti akaita seGoogle, Python, OpenStack, uye anopfuura masangano mazana maviri nemazana matanhatu pasirese.
Erich andersen, Mutevedzeri wemutungamiri weMicrosoft akati: «Nhanho inotevera inonzwisisika yekambani iri kuteerera vatengi uye vanogadzira uye yakazvipira kuLinux uye mamwe akavhurwa masosi ezvirongwa ndeiyi. Isu tinounza kuOIN yakakosha uye yakadzama portfolio yemakumi anopfuura makumi matanhatu ezviuru patent. Isu tinovimba kuti sarudzo yedu yekujoinha inokwezva mamwe makambani mazhinji kuOIN, ichiita kuti rezinesi rekupa marezenisi riwedzere kusimba kuitira kuti ruzhinji rwenharaunda ruvhure.«
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft nekufamba kwayo kwazvino kuenda kunharaunda yemahara
Chii chinozivikanwa nezve maficha nyowani muFedora 29
Maitiro ekuisa UKUI pane akasiyana Linux kugoverwa?